Cholestrol – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မေး ။ ဆရာရှင့် သမီးမေမေက medical checkup လုပ်တာ သွေးထဲမှာ အဆီများနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်လေးများ ဖတ်ထားချင်လို့ ဘယ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှ ရှာဖတ်ရမလဲ သိချင်လို့ပါဆရာ။ ဖြေ ။ ကိုလက်စထောများနေရင် နှလုံးအတက်ခ်ရစေနိုင်တယ်။...
နံနံစေ့အရည်ကို နေ့စဉ်သောက်ပေးရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုလက်စထရောအဆီတွေကို ကင်းစင်စေပါတယ်။ ပြုလုပ်ရမှာက နံနံစေ့အနည်းငယ်ကို ရေတစ်ဖန်ခွက်ထဲထည့်ပြီး ဆူပွက်အောင် ပြုတ်ပေးပါ။ ရေအနည်းငယ်နွေးတဲ့အခါမှာ သောက်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (Healthy Life ဂျာနယ်မှ စီစဉ်တင်ဆက်သည့် အပတ်စဉ် သောကြာနေ့ထုတ် Healthy Life...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၀က်ဦးနှောက်၊ ဆိတ်ဦးနှောက် စတဲ့ တိရစ္ဆာန်ဦးနှောက်တွေက ကျန်းမာရေးအတွက် မစားသင့်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုလက်စထရောတွေ အလွန်အမင်းများလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုလက်စထရောများတဲ့သူ၊ အဆီပိတ်တဲ့သူ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါရှိတဲ့သူတွေမှာ လုံးဝမစားသင့်ပါဘူး။
Q. ဆီများများ စားတာကြောင့် အသည်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသလားရှင်။ လွင်လွင် ၊ ပဲခူး ။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးဖြေကြားပေးပါသည်။ A. ဆီများများစားတာအမြဲတမ်းနဲ့သိပ်ကြာလာရင်မကောင်းပါဘူး။ ဆီများများစားတာက သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကို မြင့် တက်စေနိုင်လို့ပါ။ အဲဒီအခါ သွေးထဲက မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရော(LDL)...